Aubergines ine hupfu hwehuku, inonaka uye yakapusa kugadzira. | Kicheni Mapepa
Montse Morote | 04/05/2021 09:00 | Vegetable Recipes
Mazai ane hupfu hwechickpea. Aubergine yakarohwa uye yakakangwa inonaka, ndinovafarira zvakanyanya, urombo ndechekuti ibhomba sezvo ivo vachisveta mafuta akawanda uye haufanire kushungurudza, vanogonawo kubikwa, asi hazvina kufanana.
Mazai anokwanisa kubikwa nenzira dzakawanda, akagochwa, mumuto, akaputirwa…. Iyo aubergines ine hupfu hwehuku Iyo yakanaka kwazvo kuperekedza kune chero nyama kana hove dhishi. Zvakare sekutanga kana kufadza. Ivo vakanaka kwazvo nehupfu hwechickpea, ivo vanopenga uye vakapfuma.
Chickpea furawaInokodzera celiacs, saka inogona kudyiwa nevanhu vasingakwanise kutora gluten.
Zvikurudzire kuti uzviedze, iwe uchavafarira uye uchazvidzokorora zvakare.
Kugadzirira maabergines nehupfu hwehuku, tinotanga tashambidza maabergines zvakanaka pasi petap, tocheka aubergine muzvidimbu uye toiisa mundiro kana drainer ine munyu. Uku ndiko kusunungura mvura inovava. Tinovasiya kwemaminitsi makumi matatu, kana nguva iyi yapfuura tinovaomesa nemapepa ekicheni.
Mune mahwendefa maviri tinopatsanura hupfu hwechickpea mune imwe uye mune imwe tinorova mazai.
Tinoisa pani ine mafuta mazhinji pamusoro pemhepo iri pakati. Tichipfuura zvidimbu kuburikidza nezai uyezve kuburikidza neupfu.
Kana mafuta apisa, tinokanda zvimedu zveaubergines.
Kana dzangova ndarama pamativi ese, isu tinodzitora uye tinodziisa mundiro umo tichava nepepa rekicheni.
Kana ese ari kuvashandira kupisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Vegetable Recipes » Mazai ane hupfu hwechickpea
inoita 6 mazuva
Kutonhora!! Wakambovabikira here pane kukangwa? Famba zvakanaka?